Masinina fanapahana cnc plasma indroa Gantry
Ny fitaovana tiana hamboarina
Masinina fanodinana laser fibre fanodinana filan'ny fametahana metaly amin'ny akora vita amin'ny metaly Miorina amin'ny singa metaly na fitaovana metaly ny ankamaroan'ny singa metaly. Anisan'izany, anisan'izany ny metaly, alloys, metaly manokana, sns ... Ny fandrosoan'ny fiarahamonina dia akaiky ...
Hafainganam-pandehan-tsolika fanodinana laser amin'ny paompy, mazava tsara
Mba hampiharana lalina ny tanjona napetraka ao amin'ny drafitra stratejika fanao isan-taona, mametraha fototra mafy orina ho an'ny taona vaovao izay hanomboka. Tamin'ny 1 martsa lasa teo, i Buluoer dia nanao ny fivorian'ny kick-off marketing sy ny fianianana tamin'ny 2021; Filohan'ny Vondrona Shandong Jubangyuan Andriamatoa Jing Fengguo, Tale Jeneraly Andriamatoa Sun Nin ...
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny haitao dia mihamitombo hatrany ny fianan'ny olona. Amin'izao vanim-potoanan'ny vola izao, ny ain'ny olona sy ny asany dia manomboka mitady fahombiazana sy fahitsiana avo lenta, ary ny milina fanapahana laser vita amin'ny fibre dia afaka mamaly ny fahombiazana avo lenta sy arahin'ilay variou ...
Ny milina fanapahana laser laser dia miroso mankany amin'ny vanim-potoana avo lenta
Tamin'ny 2015, nivoaka ny milina fanapahana laser laser 6000W. Tamin'izany fotoana izany, ny fampiharana ny tsena dia mbola anjakan'ny fahefana antonony ambanin'ny 3000W. Tao anatin'ny taona vitsivitsy monja dia nitsambikina avy amin'ny 6000W sy 8000W ka hatramin'ny 10kW sy 12kW ny herin'ny milina fanapahana vy, izay toa lavitra be taloha. Ny vanim-potoanan'ny ...
Azo ampiharina amin'ny milina fanenomana laser ve ny antifreeze amin'ny fiara? Inona no mahasamihafa azy roa?
Famintinana ny fampahalalana: ny fomba fampiasana ny masinina fanapahana laser vy sy ny antifreeze amin'ny fiara dia hafa ihany koa. Ny antifreeze amin'ny fiara dia voaomana mivantana amin'ny ampahany tsara; raha ny antifreeze ho an'ny milina fanapahana laser kosa dia mila afangaro sy ampiana arakaraka ny mari-pana isan-karazany ao amin'ny ...
Nanapaka vy tamin'ny laser hamoronana tohatra fandihizana
Famintinana ny fampahalalana: Ny fahafaha-mihetsika amin'ny fanodinana masinina laser, ny endrika takelaka vy dia azo zahana arakaraka arakaraka ny takiana, izay manome toerana malalaka kokoa ho an'ny famolavolana tohatra. Ny tohatra vita amin'ny vy notapahina tamin'ny laser dia mety ho mahafinaritra? Ny mpamoronaR ...
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny haitao, ny hafainganam-pandehan'ny fiainan'ny olona dia miha haingana hatrany. Amin'ity vanim-potoana vola ity, ny ain'ny olona sy ny asany dia nanomboka nitady fahombiazana avo lenta sy mazava, ary ny milina fanapahana laser vita amin'ny fibre dia afaka mamaly ny fahombiazana avo lenta sy ...
Ny asa fikojakojana ny rafitra samihafa amin'ny milina fanapahana plastika CNC dia tsy maintsy mazava!
Ny fampiharana ny masinina fanapahana plastika CNC dia hanampy ny sangan'asa hahatratrarana vokatra fanodinana tsara kokoa mandritra ny fiasa, ary tokony hazava amin'ny fampiasana any aoriana. Ny rafitra tsirairay amin'ny milina fanapahana dia tsy maintsy tazomina ara-potoana aorian'ny fampiasana maharitra, mba hahasoa azy Amin'ny fampiasana aoriana, ny m ...
Ny milina fanapahana plastika CNC dia nanova ny haitao mihemotra amin'ny milina fanapahana nentim-paharazana!
Ny milina fanapahana plastika CNC dia be mpampiasa amin'ny ozinina. Ny vokatry ny milina fanapahana dia aseho amin'ny alàlan'ny asa fanaraha-maso isa. Ny vokany ankapobeny dia samy hafa be noho ny fomba fanapahana nentim-paharazana taloha. Fomba fanodinana milina samihafa no ampiasaina Ny anjara ...
Amin'ny ankapobeny ireo fiasa ireo dia misy fiatraikany amin'ny vidin'ny milina fanapahana CNC
Rehefa mividy milina fanapahana CNC isika dia hijery tsara ny vidiny, manantena ny hividy milina fanapahana CNC avo lenta amin'ny vidiny mirary, izay fikatsahana vola be tokoa. Raha ny marina, ny mpampanonta dia afaka mampianatra anao fomba sasany, izay ny mahatakatra mialoha izay anton-javatra misy fiantraikany amin'ny ...